Fiction mabhuku eLinux uye akavhura sosi vanoda | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi munguva ino yechando haunzwi kuda kubuda zvakanyanya nekuda kwechando. Mukuwedzera, pamwe nemamiriro azvino wedenda, iwe unenge uri kushandisa yakawanda nguva kumba. Iwe unenge uine yakawanda nguva yekuita mamwe mabasa senge nakidzwa nekuverenga. Kana iwe uchida iyo nyika yehunyanzvi, Linux, uye yakavhurwa sosi, iwe unofanirwa kuziva mamwe anonakidza mabhuku iwe aungade.
Mamwe mabasa enganonyorwa auchanyanya kuda, pamusoro pemanovhosi uye mamwe mabasa ekutengesa mabhuku. Saka, kana iwe uchifarira kutenga mamwe mabhuku mitsva yekuraibhurari yako yega kana kuzadza yako eBook muverengi nemamwe mazita matsva enguva ino, heano mamwe mazano ...
Kereke huru uye iyo bazaar: ndeyechinyakare, yakanyorwa naanozivikanwa Eric S. Raymond. Icho chinyorwa pane yakavhurwa sosi uye chakave nezvimwe zvakateedzana. Mariri, mhando mbiri dzekugadzirwa kwesoftware dzinoongororwa. Kune rimwe divi kune kereke huru, ine hermetic uye yakatwasuka modhi yekuvandudza (muridzi), uye kune rimwe kune bazaar, ine simba, yakatenderera uye kubatikana (yakavhurika sosi).
Yekubatsira Ruramisiro: inoverengeka yesainzi nemunyori weAmerica Ann Leckie. Iyo inotaurira nyaya yaBreq, iye oga akapona muchipakavara chinotsvaga kutsiva neAI inoitonga.
Kryptonomicon: Chokwadi iro Bhuku revakafa kana Necronomicon rinonzwika kwese kwauri, ritaure zvakanaka, iyi sainzi ngano runyorwa naNeal Stephenson iri pakati penguva yepakati pehondo yenyika, uye inotaurira nyaya nezvevamwe vanyori vekunyora uye nyanzvi mukunyengera kwekunyengera. Uchaifarira kana iwe uchida chengetedzo uye kunyorera ...
Daemon: basa raDaniel Suarez uye kwaanotaurira nyaya yemukurumbira wemakomputa vhidhiyo dhizaini anonzi Matthew Sobol uye kufa kwake kamwe kamwe. Zvese zvisinganzwisisike, uye apo zvimwe zviitiko zvinotsanangurwa nezve zvinogona kuitika kana dhimoni (maitiro) ehurongwa ruchimuka mushure mezviitiko zviri kuitika mupasi, zvichiganhurana nezvinokatyamadza mune ino tyisa iyo inoratidza kuti tinovimba zvakadii yehunyanzvi ...
Microsiervos- Nhoroondo yaDouglas Coupland inoratidza yekutanga-nyaya nyaya yaDaniel nevamwe vanoshandira Microsoft vosiya kambani. Inoratidza zvakare kuti tekinoroji uye hunhu hwaBill Gates zvakakanganisa sei hupenyu hwavo.
famba uchienda: Uye kana iwe uchiziva Chirungu uye usingafarire kuverenga mumutauro uyu, ini ndinokurudzirawo basa iri naCory Doctorow. Fans yeakavhurika sosi ichaona zvimwe zvikonzero zvakanaka zvekuiverenga nekuti inotaura nezve yakavhurika uye yakagovaniswa tekinoroji, munyika umo kudhinda kwe3D kwakafambira mberi uye kwave kujairika ...
Open Source: rimwe bhuku muChirungu naMM Frick. Iyo inotaurira nyaya yemuchina wecomputer uye blogger husiku. Njere dzake dzinomutungamira kuti afumure zano rine hunyanzvi pasi rose rekutengesa zvombo pakati peIsrael, Russia, United States neMiddle East. Uye vese vachishandisa Open Source Intelligence (OSINT).
Ndiani atora chizi yangu?: Chekupedzisira, rimwe remabhuku auchada iri zita kubva muna 1998. Rinotaura nezve maitiro ekutarisana neshanduko muhupenyu nehupenyu hwepamoyo, yakanangana nekuve bhuku rinokurudzira. Asi zvakare zvinokuyeuchidza kuti kumwe kwekubudirira kwemapurojekiti akavhurika uye makambani anoshandisa tekinoroji yakavhurika chaiko ndiko kushanduka kwavo, kugona kwavo uye kurudziro inotora vashandi vavo kupfuura nharaunda yenyaradzo uye inotora nhengo dzavo kusangana neshanduko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Fiction mabhuku eLinux uye yakavhurika sosi vanoda
Iyo zvakare ine nyasha dzayo kusanganisa tekinoroji, makambani ehurumende, yakavhurwa sosi, hackers ...
Iyo yakarongedzwa neavo vezvinoevolution
Ndatenda nekuisa kwako. Chero imwe pfungwa kana mupiro unogamuchirwa ...